Zviuru neZviuru Zvinocherechedza Kufa kwaJesu muJerusalem
Zuva reChishanu reGood Friday izuva rinoremekedzwa zvikuru nevechitendero chechikristu pasi rose, apo vanoyeuka kuroverwa kwaJesu Kristo pamuchinjikwa.
Zviuru nezviuru zvemakristu zvaungana muJerusalem vachifora muhurongwa hwekuyeuka zuva re Good Friday. Vanhu ava vatevedza tsoka dzaJesu vakapfuura nemunzvimbo yeVia Dolorosa, kana kuti Way of Sorrows, munzvimbo gumi neina idzo Jesu akamira achizorora achienda kunoroverwa pamuchinjikwa.
Ranga riri gungano hombe gore rino sezvo vechitendero ichi vanosanganisira veEastern Orthodox nevemachechi ekumavirira, varangarirawo vese zuva reGood Friday.
Kunyange hazvo mvura yanaya zvikuru muJerusalem, mvura iyi haina kutadzisa vanhu kana kusvibisa moyo yavo mukutenda kwavo kuna Jesu, zvekuti vanhu vabva mumativi mana ose epasi rino, vakaungana mu Jerusalem.
Vanhu ava vanosanganisirawo VaMark Billings vekuChigago muAmerica, avo vaendawo kuJerusalem.
Mapurisa nemauto anga akachengetedza vanhu munzvimbo yeVia Dolorosa, apo vanga vachienda muchechi yeChurch of Holy Sepulcher, nzvimbo inorangarirwa makore ose senzvimbo yakaroverwa Jesu pamuchinjikwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvatangawo zororo reEaster vachicherechedza kuroverwa kwaJesu, kufa pamwe nekumuka kwake.
Svondo zhinji munyika dzapinda misa neChishanu, vamwe vachienda kumagungano akasiyana siyana ekucherechedza zororo rinokosha pasi rose muvatenderi vechikristu.
Baba Paul Gwese veAnglican Church muWaterfalls vanoti zororo reEaster izororo rakakosha zvikuru kuzvizvarwa zveZimbabwe nekuti rinovapa tarisiro yekuti kunyange zvinhu zvikaipa sei, zvinozonaka chete nerimwe gore nekuda kwamwari kubudikidza nemwanakomana wake Jesu Kristo.